ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: လျှပ်စစ်မီတာခဈေးနှုန်း မြင့်တက်ခြင်းကြောင့် ရန်ကုန်မြို့တွင် ဆန္ဒပြမှုများ ဖြစ်ပေါ်
လျှပ်စစ်မီတာခဈေးနှုန်း မြင့်တက်ခြင်းကြောင့် ရန်ကုန်မြို့တွင် ဆန္ဒပြမှုများ ဖြစ်ပေါ်
လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ၁ ယူနစ်ထုတ်လုပ်စရိတ် က ပြည်သူတွေဆီကကောက်ခံတဲ.နှုန်းထားထက် များနေတယ်ဆိုတာ လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်၊
တဲ. အောက်ခြေ၀န်ထမ်းများရဲ.လစာဟာ သူတို.စားဝတ်နေရေး အတွက်မလုံလောက်တဲ.ကြားထဲ
မှာကို မီတာခအတွက် အနည်းဆုံး လစာရဲ. ၂၀%
(၅ ပုံ ၁ပုံ) ၈၀၀၀ကျပ်
၉၀၀၀ ကျပ်လောက် ကျသင်.နေကြရတာပါ ။
ဒီပမာဏဟာ လာဘ်ငွေမရတဲ. ၀န်ထမ်းကြီး/ငယ်များ အတွက်တော.မနည်းပါဘူး ။
မီတာခတွေ တက်ရင် ဒီထက် ပိုကုန်ကြတော.မယ်။
လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ၁ ယူနစ်ထုတ်လုပ်စရိတ် က ပြည်သူတွေဆီကကောက်ခံတဲ.နှုန်းထားထက် များနေတယ်ဆိုရင်လည်း နိုင်ငံတော်ကဘဲစိုက်ထုတ်
(၁) နိုင်ငံ.၀န်ထမ်းလစာများ သင်.တင်.တဲ.ပမာဏ
(၂) သဘာဝဓါတ်ငွေ.များအလျံပယ် ထွက်သော်လည်း
နိုင်ငံ.ပြည်သူများအတွက် မချန်ဘဲ တရုတ်၊ထိုင်း
သို. ရောင်းစားခြင်း ။
ပြီး ပြည်သူများအားဖြန်.ဝေမှုမရှိခြင်း ။
(၄) သစ်တောများ အားလုံးနီးပါး အား ရောင်းစားခဲ.
သဖြင်. ထင်း၊မီးသွေးဈေးများ မြင်.ပြီး
ပြည်သူများအတွက် မီးဖိုချောင်သုံးရန် လျှပ်စစ်
ဓါတ်အားမှတပါး ရွေးခြယ်ရန်မရှိခြင်း ။
(၆) အိမ်ငှားခ ၊ အထွေ၂ ကုန်ဈေးနှုန်း တနေ.တခြား
... စတာတွေကြောင်.ပါ ။
ပြည်သူ. အစိုးရစစ်စစ် ဆိုရင် ဒီလိုလုပ်မှာမဟုတ်